Khulisa Ukudla Okumisiwe Okumisiwe - Kuhle Akhule Ukudla Freeze omisiwe
Kuyini THRIVE Freeze Ukudla Okumisiwe?
Lokhu kudla ngeke konakalise ezinsukwini ezimbalwa… noma ngisho emasontweni ambalwa. Bahle.
Ngeke uncibilike, ukuncipha, noma ukusika inyama eluhlaza.
Futhi kunokuqhuma okwengeziwe kwe-flavour ongeke ukuthole kwenye indawo! Thatha nje ukuluma!
Lapho udinga isithako sokunye kokupheka kwakho kwansuku zonke, mane ukhethe umkhiqizo we-THRIVE bese uwengeza kumxube- njengoba nje ubungathanda ngezithako ezintsha. Ukugcina THRIVE ekhishini lakho kufana nokuba nemakethe yakho yasekhaya noma isitolo sokudla sasekhaya, kugcwele ngokuphelele konke ukudla okuthandwa ngumndeni wakho. Isikhathi osonga ngokungagijimeli emuva naphambili esitolo sokudla sendawo kuzoba isikhathi esibalulekile ongasisebenzisa ukwenza imisebenzi oyithandayo.
Zama ukuchuma ukudla okomisiwe nge-ThriveLife namuhla. Zimnandi futhi zinempilo. Izoshintsha indlela othenga ngayo, futhi ulungise ukudla.
Umbala Omningi, Okuningi Flavour, Amakhemikhali amaningi, Okuningi WOW!
Siseshe umhlaba wonke ukuthola okusha kuphela, izithako ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Ukudla kwempilo echumayo akuqukethe i-MSG futhi kukhethwe mathupha ngokuya ngamazinga aqinile. Kusuka epulazini kuya ekhaya lakho, uqobo lwethu sibheka yonke inqubo yentuthuko ye-THRIVE ukuze ube nokuthula kwengqondo wazi ukuthi uthola imikhiqizo yokugcina yokugcina ukudla etholakalayo.
Ngoba i-THRIVE yathuthukiselwa ukuhlelwa kwemenyu kwansuku zonke, sikwenze kwaba inhloso yethu ukuqinisekisa ukuthi ukudla okudlayo kunambitheka kakhulu! Ngokungafani neminye imikhiqizo yokugcina ukudla efihlwa kude futhi engakaze isetshenziswe, imikhiqizo yokugcina ukudla ikhula ihlolwe kaninginingi ukuqinisekisa ubusha bayo nokunambitheka okuhle. Ngokudla kwe-THRIVE, ukunambitheka okukhulu kuyinto ejwayelekile - hhayi okuhlukile.
Ngezindleko eziphansi ngokusebenza ngakunye, UKUDLULA ukudla kuyindlela enhle yokonga imali ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi umndeni wakho uthola ukudla nokudla okufanele. Chuma ukudla = inani elihle kakhulu!
Izindlela zokupheka ezenziwe kalula zifakiwe kuwo wonke amathini we-THRIVE ngakho-ke awusoze wasala uzibuza ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukudla okuchumayo okuthengayo. Ngoba sifuna umndeni wakho ujabulele ukunambitheka okungcono kakhulu nokudla okunempilo, zonke izindlela zethu zenzelwe ngqo imikhiqizo ye-THRIVE.
Amathini ethu anemibala agcina ukudla kwakho kuhleleke kahle ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi ukudla kwakho kuqukethe inani elifanele lokulinganisela nokuhlukahluka. Lapho isetshenziswa ngokubambisana ne-Food Rotation Systems yethu, UKUDLULA ukudla kudla ngokushintshaniswa, Ukuqinisekisa ukuthi umndeni wakho uthola ukudla okusha kakhudlwana okungenzeka.
Iziphuzo ezintsha ze-RUVI ezivela ku-THRIVE
Izithelo Nemifino Akukho Okunye. Funda kabanzi
I-Thrive Life ikwenze kwaba lula (futhi tastier) ukuthola izithelo nemifino yakho ngama-powders wethu omisiwe. URuvi izithelo eziphelele nemifino, kufaka phakathi yonke leyo fiber enempilo futhi akukho okunye, bakhethe umsoco wabo ophakeme kakhulu futhi baqandisa omisiwe ukukhiya lezo zinongo kanye nakho konke lokho kunambitheka!
Isikhwama ngasinye sinezinsiza ezingama-4x zezithelo nemifino eyomile eqondile. Akukho okunye.
Uyazi ukuthi Siyathengisa:
nqabela inkukhu eqoshiwe eyomile
nqabela inyama yenkomo eyomile
nqandisa iziqhumane zenkomo ezomile
Izingcezu Zenkukhu Ezinongwe
nqabela ingulube eyomile eyomile
nqabela inyama yenkomo eyomisiwe
nqabela ubhontshisi omnyama omisiwe
iqhwa amaqanda aqhephukile omisiwe
nqabela ubhontshisi owomile omisiwe
nqabela osheshayo ubhontshisi obomvu obomile
Ubisi, Izithelo, Nemifino
nqabela ukhilimu omuncu omisiwe
iqhwa ushizi omisiwe we-parmesan
i-monterey jack shred shredded
nquma ukulunywa kwe-yogurt kwe-sitrobheli
nqabela anyanisi oluhlaza owomile
nqabela izingcezu ze-apula ezomile
nqabela ama-apula we-fuji omisiwe
omisiwe ama-apula ogogo bensimbi
nqabela upelepele owomisiwe
Siphinde futhi sithengise ama-snackies amangalisayo 🙂
Thola eyakho Iziswidi! Ungakhohlwa okwethu Khulisa isitoreji sokudla uhlelo
IZINTO EZINGCONO KAKHULU ZOKUPHEPHA UKUDLA KOKUPHILA
UKUYALELWA KUSUKELA KUKHULUZA UKUDLA OKOMILE NAMUHLA!
Umugqa womkhiqizo wokudla okomisiwe we-THRIVE uqukethe izithelo, imifino, inyama, ubhontshisi, okusanhlamvu, okobisi, ngisho neziphuzo nokudla okunempilo, ukukulondolozela uhambo oluya esitolo njalo uma uphelelwa izithako ezibalulekile njengamaqanda noma ubisi.
Ukudla okomileyo okomisiwe kwenziwa lapha e-USA futhi kuhlanganiswe yiTrive Life. UKUDLULA ukudla kuneshalofu impilo ehlala isikhathi eside 5-25 iminyaka, okwenza kube ukudla okuphuthumayo okukhulu noma ukudla okusinda. Lokhu kudla okomisiwe kungagcinwa ekhishini lakho noma kwi-pantry isikhathi eside ngaphandle kokukhathazeka ngokonakala. Kuyindlela enhle yokonga imali ngesikhathi somnotho okhulayo noma wokwehla kwamandla omnotho. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obufriza iqhwa, Ukudla okuchumayo kugcina 99% wezakhamzimba, imibala, nokuthungwa. Futhi imikhiqizo yethu yokudla eqandisiwe eyomisiwe iyanambitha okumangazayo! Ilungele ukugcina isikhathi eside nokusetshenziswa kwansuku zonke lapho kunokuphazamiseka kokuphakelwa kokudla.
Isobho Lamatamatisi Elinongiwe
Ubhontshisi Omnyama weSalsa
Iphakethe Lompheki Wengulube Ohuduliwe
Iphakethe Lenkomo Yenkomo Yomhlaba
Ukukhetha Kompheki- I-Spice Can